GPU Kuyera vs Kuratidzira Kuyera kwakatsanangurwa
Muchidzidzo cheComputing , Scaling inzira yekuwedzera kana kuderedza saizi yechinhu. Kuyera kwechinhu kunoitwa nekushandisa Scale Factor. The ScaleFactor or Shanduko Factor rinoshandiswa kushandura hukuru hwemufananidzo kana chinhu pasina kusandura chimiro chacho. Vamwe vako vanogona kunge vakanzwa nezve mazwi eGPU Kuyera uye Kuratidzira Kuyera. Munyaya ino, tichataura pamusoro kusiyana pakati GPU Kuyera uye Kuratidzira Kuyera, uye zvakanakira nezvazvakaipira.
Chii chinonzi GPU Kuyera?
GPU Kuyera chinhu chakavakirwa-mukati chemazuva ano magiraidhi makadhi ayo anokuita kuti utore chikamu chechikamu chemutambo zvinoenderana nekugadziriswa kwemonitor yako. Ngatizvinzwisisei nemuenzaniso. Mitambo yechikuru yaive nechikamu che4:3 kana 5:4. Asi nhasi, inenge mitambo yose inogadzirwa maererano nehuwandu hwehuwandu hwevatariri vemazuva ano, kureva, 16: 9 uye 21: 9. Kutamba mutambo wekare nechiyero che4: 3 kana 5:4 pamamonitor emazuva ano ane chiyero chakakura chinozokonzera kukanganisa kwemufananidzo nevhidhiyo. Nekudaro, kuitira kuchengetedza mufananidzo uye vhidhiyo mhando yemitambo yekare, isu tinoshandisa GPU Kuyera. Iyo GPU Kuyera inoita gadziriso dzakakodzera kuhukuru hwemutambo uye inoita kuti ikwane chidzitiro nechiyero chakakura.
Nemashoko akareruka, nekushandisa GPU Kuyera, mushandisi anogona kutamba mitambo yechinyakare pachiratidziro ine hukuru hukuru hwereshiyo pasina chero pixelated mhedzisiro. Kana vamwe vako vakambotamba mitambo yechikuru pane mamonitor ane yakakura chiyero chechiyero, waona mabhawa matema akatenderedza mutambo. Izvi ndizvo zvakaitwa neGPU Scaling kuchengetedza mhando yemutambo.
Mhando dzeGPU Kuyera
Kana kadhi rako remifananidzo richitsigira GPU Kuyera, uchaona matatu anotevera eGPU Scaling modhi muzvigadziro (mazita emamodhi aya anogona kusiyana kumakadhi emifananidzo emhando dzakasiyana):
Chengetedza Maonero Ratio
Ngatione ese aya matatu marudzi eGPU Scaling modes.
1] Chengetedza Aspect Ratio
Sezvinoreva zita, mune iyi GPU Scaling nzira, iyo yepakutanga chikamu cheyero yemutambo inochengetedzwa. Nekudaro, hazvina basa kuti unotamba mutambo uyu mune yakazara-screen modhi kana mune yakavharwa mode, mutambo uchaunzwa pachiratidziro chako chekutarisa pasina chero pixelated mhedzisiro.
Sezvo mutambo usina kutambanudzwa nenzira iyi yeGPU Kuyera, iwe uchaona mabara matema akatenderedza mutambo. Nekushandisa iyo Maintain Aspect Ratio GPU Kuyera, unogona kutamba mitambo yechinyakare pane mahombe skrini mumhando yavo yepakutanga.
Iyo Yakazara Panel GPU Kuyera nzira inopa mutambo pachiratidziro chose nekutambanudza zviyero zvayo. Nekudaro, mune iyi nzira yeGPU Kuyera, iwe unowana blurry mhedzisiro mumitambo yako. Kana iwe uchivenga mabhawa matema akatenderedza mutambo wako, unogona kutambanudza kune yakazara skrini asi iyo inobuda ichave ine pixelated kutaridzika.
Munzira iyi, kuyera kwechifananidzo kunodzimwa uye mutambo wose unoratidzwa pakati pechiratidziro nemabhawa madema akaipoteredza. Iyi nzira yakanaka kana iwe uchida kutamba mitambo ine yakaderera resolution pane yakakura skrini pasina kukanganisa mufananidzo wavo uye vhidhiyo mhando.
Chii chinonzi Display Scaling?
Display Scaling inoshandiswa kuwedzera uye kuderedza zvinyorwa, font, uye zvimwe zvinhu pachiratidziri. Display Scaling ndiyo mhinduro yakakwana kune vashandisi vane maziso asina kusimba. Ivo vanogona kushandisa Display Scaling kuwedzera saizi yezvinhu pachiratidziro kuitira kuti zvinyorwa zvive nyore kuverenga.
GPU Kuyera vs Kuratidzira Kuyera: Iyo Misiyano
Pamusoro, tatsanangura kuti GPU uye Display Scalings chii. Zvino, ngatione misiyano yakakosha pakati peGPU uye DIsplay Scaling.
MuGPU Kuyera, basa rekukwidza nekudzikisa vhidhiyo kana mufananidzo rinoitwa neGraphics Processing Unit (GPU). Kune rimwe divi, muDisplay Scaling, kukwirisa nekudzika mabasa kunoitwa nekombuta kuratidza.
Kana akawanda mamonitor ekugadziriswa kwakasiyana akabatana kune yako sisitimu, komputa yako inokuratidza sarudzo yekuseta yakasiyana Display Scaling kune ese mamonitor. Kune GPU Kuyera, iwe unozoda akawanda magiraidhi makadhi.
Display Scaling haidi yakatsaurirwa kadhi yemifananidzo. Kadhi repikicha rekombuta yako rakakwana kuita Display Scaling. Kune rimwe divi, GPU Kuyera inoda yakatsaurirwa kadhi yemifananidzo kubata iyo yakakwira uye yakaderera-resolution mitambo pachiratidziro chine humwe hunhu.
Unogona kuita Display Scaling nekuvhura yako Windows 11/10 mudziyo Settings panel. Ipo, yeGPU Kuyera, iwe unoda software.
Iyo Display Scaling inoenderana nehuwandu hwepixels mumufananidzo. Nekudaro, Display Scaling inonyanya kushanda kune yakakwirira resolution mifananidzo. Pane zvinopesana, mhedzisiro yeGPU Kuyera zvinoenderana nekuita kweGraphics yako Processing Unit. Ndokusaka mitambo yepamusoro-resolution ichida rinorema-basa remifananidzo kadhi kuita GPU Kuyera.
verenga: Maitiro ekugonesa GPU Kuyera muRadeon Software neinodiwa Scaling Mode.
Zvakanakira uye Zvakaipa zveGPU Kuyera uye Kuratidzira Kuyera
Pamusoro, takakurukura kuti GPU uye Display Scalings chii uye kuti misiyano yavo yakakosha chii. Zvino, ngatitaurei nezve zvakanakira nekuipira kweGPU Kuyera uye Kuratidzira Kuyera.
Zvakanakira zveGPU Kuyera
NeGPU Kuyera, iwe unowana sarudzo nhatu dzekugadzirisa zviyero zvemutambo kune yako skrini kana yekutarisa.
Iyo GPU Scaling inonyatsokodzera kutamba mitambo yechikuru ine yakaderera chikamu cheyero pachiratidziro ine yakakwira chikamu.
Iyo Chengetedza Aspect Ratio uye Center modhi yeGPU Kuyera inobatsira kuchengetedza mhando yemutambo uye nekuuratidza pasina kukanganiswa kwakawanda. Uchishandisa nzira mbiri idzi dzeGPU Kuyera, unogona kutamba mitambo yechinyakare pamamonitor emazuva ano usingakanganisi kugadzirisa kwemutambo.
Cons yeGPU Kuyera
Kunyangwe GPU Kuyera ichichengetedza mhando yemitambo nekuchengetedza yavo yepakutanga chimiro, inovandudza mabhawa akashata akatenderedza mutambo.
Kana iwe usingade mabara matema akatenderedza mutambo wako, unogona kushandisa iyo Yakazara Panel modhi yeGPU Kuyera asi iyi modhi inotambanudza mutambo kuzadza iyo skrini yese inozotungamira mukukanganisa.
Imwezve kusavimbika kweGPU Kuyera ndiyo yekuisa lag. Paunodzvanya kiyi uchitamba mutambo, iwe uchaona kunonoka kushoma pachiratidziro chako.
Iyo Display Scaling haidi yakatsaurirwa kadhi yemifananidzo. Iwe uchawana sarudzo yekushandisa akasiyana Display Scaling mumaseting emudziyo wako.
Unogona seta yakasiyana skrini yekugadzirisa kune akawanda mamonitor uchishandisa Display Scaling.
Cons of Display Scalling
Kana zvasvika kune yakakwira DPI zvishandiso, Display Scaling inova yakaoma. Vashandisi vanogona kusangana nezvimwe zvinhu pavanenge vachishandisa iyo Ratidza Kuyera pamidziyo yakakwira DPI.
Ndeipi iri nani GPU Kuyera kana Kuratidza Kuyera?
Vese vari vaviri GPU Kuyera uye Kuratidzira Kuyera vane zvavo zvakanakira nezvayakaipira. Iyo GPU Kuyera yakanaka kana iwe uchida kutamba iyo yekare mitambo pane yakakura skrini pasina kukanganisa kunaka kwemifananidzo yavo. Kune rimwe divi, GPU Kuyera zvakare kunokonzeresa mune yekuisa lag. Kana tikataura nezve Display Scaling, inokutendera kuti uise zvigadziriso zvakasiyana zvezviratidziro zvakasiyana zvakabatana kune yako system. Kune rimwe divi, Display Scaling inova yakanyanya kuoma kune yakakwira DPI zvishandiso.
Iyo GPU Kuyera inowedzera kuita?
Kuyera kweGPU kunoitwa kugadzira mitambo yechikuru (mitambo yakagadziridzwa zvikirini zvine chikamu che4: 3 kana 5:4) inoridzwa pamamonitor emazuva ano kana zviratidziro (zviratidziro zvine reshiyo yepamusoro). Zvino, kuuya kumubvunzo, kana iwe uchiita GPU Kuyera, unogona kusangana nekushomeka kwekuisa mumitambo. Nekudaro, GPU Kuyera inogona kukanganisa kuita kwemitambo yako.